Osaka တွင်နေထိုင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် (၇) ခု - JAPO Japanese News
ဂါ 10 Nov 2020, 16:02 ညနေ
Osaka ဆိုတာ လည်ပတ်ဖို့အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့အားလုံးလည်းသိပြီးတဲ့အတိုင်း အိုဆာကာရဲ့ ခေတ်မီတဲ့ဗိသုကာအဆောက်အအုံတို့နဲ့ ညအလှကြောင့် သူဟာအဓိကစီးပွားရေးမြို့ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ခရီးသွားတွေကအရသာရှိတဲ့ street food တွေစားနိုင်တဲ့အပြင်၊ သမိုင်းဝင်ရဲတိုက်နဲ့နတ်ကွန်းများ၊ ပြီးတော့ နွေဦးအချိန် ဆာကူပန်းတဲ့ရဲ့အလှကိုလည်း ခံစားသက်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အိုဆာကာကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်မှာနေရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကလည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် အိုဆာကာအကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး သင်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးနေရာကို ရှာဖွေဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍သင်ဟာ အစားတစ်လိုင်းဖြစ်ပြီး၊ ညဘက်ရှောက်သွားရတာပါသနာပါသူဆိုရင်တော့ Namba ဧရိယာက သင့်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nambaဟာ အိုဆာကာရဲ့တောင်ဘက်အခြမ်းမှာရှိပြီ ဘယ်တော့မှမငြိမ်းသွားတဲ့မီးအလင်းရောင်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေအပြင်၊ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေရှိတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စားစရာဆိုင်တွေအလွယ်တကူတွေ့နိုင်တဲ့နေရာ၊ ဈေးဝယ်နိုင်တဲ့နေရာနဲ့ ညဘက်လမ်းလျှောက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အိုဆာကာမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ အသွားသင့်ဆုံးနေရာက Dotonbori လို့ခေါ်တဲ့ ရောင်စုံဆိုင်းဘုတ်တွေရှိတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပါအတိုင်းပါ။
2.Kita / Umeda
Umeda ဆိုတာကတော့ အိုဆာကာရဲ့မြောက်ဘက်အခြမ်းမှာရှိပြီး၊ မြို့ရဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံးပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာပါပဲ။ ၎င်းကလည်းထို့အတူပဲ လုပ်ငန်းအများစုတည်ရှိပြီး၊ အစားအသောက်တို့ရဲ့ဆုံမှတ်လည်းဖြစ်ကာ ဈေးဝယ်ထွက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြင် သူ့မှာတော့ မြေအောက်ရှော့ပင်မောလည်းရှိပါတယ်။ နေ့ဘက်ဆိုရင် ရုံးသွားရုံးပြန်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ စည်ကားတဲ့မြို့ ဖြစ်တဲ့ ဒီမြောက်ဘက်အခြမ်းမှာ အိုဆာကာဟိုတယ်အများစုလည်းရှိပါတယ်။
3.Osaka Castle area
Osaka ရဲတိုက်အနီးပတ်ဝန်ကျင်ကတော့ လူထူထပ်မှုနည်းပြီး၊ နွေဦးမှာဆာကူပန်းတွေကလည်း အရမ်းလှတာကြောင့် ရဲတိုက်အနီးနေထိုင်ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ ရဲတိုက်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကို ကျုံးသဖွယ်ရေနဲ့ဝန်းရံထားတာကြောင့်လည်း ရှေးသမိုင်းထဲကိုရောက်သွားသလိုခံစားရစေပါတယ်။ Osaka ရဲတိုက်ကိုတည်ထောင်သူကတော့ စာဖတ်သူတို့သိထားတဲ့အတိုင်း စစ်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ Toyotomi Hideyoshi ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ သူဟာ ၁၆ ရာစုလောက်မှာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ဒီရဲတိုက်ကိုဆောက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီရဲတိုက်က မီးလောင်ပြာကျဖူးပြီး အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ရဲတိုက်ကို ၁၇ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစုမှာထပ်မံပြန်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတိုက်အတွင်းဘာရှိမလဲ အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ အတွင်းထဲမှာ ရှေးဟောင်းလက်နက်၊ ချပ်ဝတ်တန်ဆာနဲ့ ရိုးရာနေထိုင်မှုဘဝကို ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။
၈ လွှာမြောက်မှာ ခရီးသွားတို့အတွက် view point လည်းရှိပါတယ်.
4.Honmachi (Central Osaka)
Honmachi ဆိုတာ အိုဆာကာရဲ့အလယ်ဗဟိုဖြစ်ပြီး Midosuji မြေအောက်ရထားလိုင်းပေါ်၊ Kita နဲ့ Namba ကြားမှာတည်ရှိပါတယ်။ ၎င်းဟာကုမ္ပဏီရုံးတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး လည်ပတ်ဖို့အတွက်တော့ သိပ်ပြီးအထူးအဆန်းမရှိပါဘူး။ သို့သော် စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဘီယာဆိုင်အမြောက်အများရှိတယ်။ သင်ဟာလမ်းလျှောက်ရတာကြိုက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ Honmachi ကနေ ဆိုဆာကာရဲတိုက်အထိကို လမ်းလျှောက်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒီနေရာမှာဟိုတယ်တွေ ဈေးကြီးပါတယ်။
5.Konahona (Universal Studios)
Konahona ဟာ ဂျပန် Universal Studios ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကဆက်သွယ်သွားလာမှုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်သလို၊ တစ်ဖက်မှာလည်း ခရီးသွားတွေအေးဆေးစွာအနားယူနိုင်တဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Yodo မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် အစိမ်းရောင်အပင်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။
Tennoji ဧရိယာက အိုဆာကာမှာတိုးတက်လာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သူဟာအရမ်းစည်ကားတဲ့ Namba ရဲ့အနည်းငယ်တောင်ဘက်အခြမ်းလေးမှာပဲရှိပြီး၊ အဓိကရထားဘူတာရုံဖြစ်တဲ့ Tennoji station ရဲ့ဌာနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာဟာ မြို့ရဲ့အဆင်းရဲဆုံးနေရာထဲကတစ်ခုဖြစ်ရာကနေ မကြာသေးမီကပဲများစွာသောရှော့ပင်းမောတွေနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထားတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနေရာမှာ ဂျပန်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ Abeno Harukas ကြီးလည်းရှိပြီး၊ ထို Abeno Harukas ရဲ့ ၁၆ ထပ်မြောက်မှာတော့ Abeno Harukas အနုပညာပြခန်းရှိပါတယ်။
Shin-Osaka ဧရိယာမှာတော့ ဘာမှလုပ်စရာသိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူကဂျပန်ရဲ့အခြားနေရာတွေကနေ အိုဆာကာကိုဝင်လာမယ့် ကျည်ဆန်ရထားတို့ရဲ့အချက်အချာနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Midosuji မြေအောက်ရထားလိုင်းရှိတဲ့ဘူတာဖြစ်တာကြောင့် ဒီကနေ မြို့ရဲ့ အခြားသောနေရာတွေကိုအလွယ်တကူသွားနိုင်ပါတယ်။ Kita နဲ့ Namba ဆီကိုလည်း Midosuji မြေအောက်ရထားလိုင်းကနေ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းရောက်နိုင်ပါတယ်။ Shin-Osaka ကနေ ကျိုတိုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်ဆုံး (၁ နာရီ မိနစ် ၄၀) လောက်နဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ အိုဆာကာရော၊ ကျိုတိုကိုပါ ဟိုတယ်ပြောင်းစရာမလိုဘဲ သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာနေဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
ဒီအပြင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ချက်ပြုတ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေပါဝင်တဲ့ ဂျပန်တစ်ခွင်ခရီးသွားတို့အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသောဟိုတယ် အများအပြားလည်းရှိပါတယ်။
အိုဆာကာဟာ မြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင်ဟာ အိုဆာကာမှာနေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
(၃၀)ရက်နေ့၊ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ကူးစက်မှု ၅၆၃ ဦးရှိ !!! ၆ ဦးသေဆုံး !!!